galaxy s7 gees sheegasho ayaa ku soo baxday qiimaha iyo sanduuqa ku jira
Ugu Weyn Ee Wararka & Dib U Eegista Sheegashada Galaxy S7 Edge ayaa la soo baxday qiimayaal iyo sanduuqyada ku jira
Sheegashada Galaxy S7 Edge ayaa la soo baxday qiimayaal iyo sanduuqyada ku jira
Samsung ayaa si quruxsan ula jaanqaadaysa qulqulka Galaxy S7 sanadkan, gaar ahaan labadii toddobaad ee ugu dambeeyay, markii aan aragnay waxa xiga ee ugu fiican riix wargeysyo saddex nooc oo midab leh , iyo gudaha hilib iyo dhiig sidoo kale. Shalay Samsung lafteeda ayaa shaaca ka qaaday muuqaalka moobaylka fiidiyoow horudhac ah oo la soo duubay, oo xaqiijinaya wararka la isla dhexmarayo waxay noqon doontaa mid aan biyuhu ku xirnayn oo isboorti lacag la'aan ah.
Ma jiraan wax noo diyaariyey daadadan soo socda ee aad hoos ku aragto, in kastoo. Qof jooga Dubizzle (noocaas & apos; s Dubai & apos; s version of Craigslist) ayaa soo dhejiyay wax u eg Galaxy S7 Edge dhab ah oo iib ah, annagu ma nihin caruur. Ninku wuxuu weydiisanayaa lacag u dhiganta $ 1225 taas, taas oo u muuqata codad aad u sarreeya haddii aadan ahayn sheikh reer Dubai ah, laakiin gebi ahaanba waa u qalantaa waxa u noqon kara taleefanka gacanta ee ugu fiican xilli aan weli la shaacin & apos; ''Hel kahor intaan la bilaabin ganacsiga, lagana keenay Mareykanka, 'waa sharraxaadda isha-waraabinta ee', 'taleefankuna wuxuu u muuqdaa inuu dhammaystiran yahay koodhka baararka iyo waraaqaha IMEI runtii. Dubizzle dhajinta ayaa sidoo kale liis garaynaysa qiimaha Galaxy S7 oo ah $ 1144, cinwaanka xayeysiintuna wuxuu sheeganayaa in ninku sidoo kale iibinayo midkaas, in kasta oo ay tahay & apos; kaliya S7 Edge ee sawirrada, adoo ka qiimaynaya dhinacyada shaashadda xaggiisa dambe.
Ku darida cayda dhaawaca, kuwa loo yaqaan 'classified' waxay muujiyeen waxa iman kara iyadoo Galaxy S7 iyo S7 Edge ay ka soo baxayaan sanduuqa, in kasta oo xaqiiqda ah in taleefanka lagu dhex galiyay kartoon guud. Waxaan helnay fiilo xog ah, xeedho gidaar, iyo adabtarada USB-ka, iyo sidoo kale waxa u eg sanduuq yar oo loogu talagalay dhagaha dhagaha. Xaqiiqdii, raadinta degdegga ah waxay soo celineysaa lambar EO-EG920BW si ay u noqoto isla dhagaha dhagaha ee dhegaha la yimaada Galaxy S6, sidaa darteed & apos; waxa laga yaabo in lagu rakibo Galaxy S7 sidoo kale. Iskusoo wada duuboo, haddii dhammaan xogaha dhowaan soo baxay ay sax yihiin, waxay umuuqataa in isbeddelada waaweyn ee Galaxy S7 ay hoos imaan doonaan daboolka. Qaadanaya kasta?
Waad ku mahadsantahay tilmaamaha, Rohit!
Gawaarida loo yaqaan 'Galaxy S7 Edge' ayaa ku soo qulqulaya Dubai qiimo iyo sanduuqyada ku jira
iphone 12 pro max heshiisyada
haddii bayaan Python xaalado badan
galaxy note 9 heshiisyada jimcaha madow
Qalabka ugu fiican iPhone 12 MagSafe
Muuqaalka cusub ee 'Instagram' ayaa sheekadaada u rogaya hees-wadaag
Waa kan Samsung Galaxy Note 9 S Pen vs Note 8 S Pen sawirka
Qoraalka Bash - Hello World Tusaale
Sida looga ilaaliyo taleefankaaga garaacida jeebka iyo fariimaha qoraalka ee dadka bakhtiyaanasiibka ah
Samsung & apos; Galaxy Z Fold 3 iyo Flip 3 ayaa lagu soo waramayaa inay hoos u dhacayaan qiimo aad u weyn
Sida loo arko loona soo cesho lambarka sirta ah ee Wi-Fi ee Android,
BestBuy iyo Walmart Black Friday ads ayaa daadanaya - $ 250 oo kaararka hadiyadaha ah oo leh Galaxy S7 ama gees S7 ah
Apple & apos; s 2020 iPhone 12 safka lagu sawiray naqshadeeyayaasha quruxda badan